(ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဆောင်ပုဒ်: တရားမျှတခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှင့် အလုပ်
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "Arise, Congolese"
• လွတ်လပ်ရေး (ဘယ်လ်ဂျီယမ်မှ)
ဇွန် ၃၀၊ ၁၉၆၀
၂,၃၄၅,၄၀၉ စတုရန်းမိုင် (၁၀၀၁ km 2) (အဆင့်: ၁၁)
၇၁,၇၁၂,၈၆၇ (အဆင့် - ၁၉)
၂၉.၃ /km2(၇၅.၉ / စတုရန်းမိုင်) (အဆင့် - ၁၈၂)
နိမ့် · ၁၆၈
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ The World Factbook- Congo, Democratic Republic of the. Central Intelligence Agency.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Democratic Republic of the Congo။ International Monetary Fund။ 2011-04-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Robinson၊ Simon။ "The deadliest war in the world"၊ Time.com၊ 2006-05-28။ 2010-05-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ&oldid=533257" မှ ရယူရန်
၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၇:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၇:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။